Midowga Yurub Oo Ku Yaboohay Lacag Wax Lagaga Qabto Faqriga Ka Jira Afrika | Saxafi
Midowga Yurub Oo Ku Yaboohay Lacag Wax Lagaga Qabto Faqriga Ka Jira Afrika
Addis-Ababa, Itoobiya, November 13, 2015 (Saxafi) – Ururka Midowga Yurub ayaa shalay shaaciyay in maal-gelin deg-deg ah ay ku sameyn doonaan Afrika, iyagoo ku deeqay dhaqaale gaadhaya 2-bilyan oo doollar, si wax looga qabto saboolnimada iyo colaadaha, kuwaasoo sabab u ah qoxootiga faraha badan ee ku qulqulaya Qaaradda Yurub.
Yaboohan dhaqaale oo looga dhawaaqay kulan ay madaxda Yurub iyo Afrika uga socday laba maalmood jasiiradda Malta, iyadoo mas’uuliyiinta ururka Midowga ay gaba-gabadii kulanka ka sheegeen in waddamada Yurub ay lacagtan bixiyaan, iyadoo waddo dhowr ah ay kaga dhawaaqeen kuklanka yaboohooda.
Qaaradda Yurub ayaa waxaa lasoo gudboonaaday dhibaatooyinkii ugu xumaa in ka badan Nus Qarni, iyadoo sannadkan ay waddamada Yurub galeen qoxooti ka imaanaya Suuriya iyo waddamo ah, taasoo sababtay in shirka Malta la qabto.
“Yaboohaan dhaqaale ma ahan mid dhibaatada jirta Qaarada Afrika wax looga qaban karo. 1.8 milyan Euro waa mid aan ku filnayn baahiyaha jira,” ayuu yidhi madaxweynaha Niger, Mahamadou Issoufou oo intaas ku daray in xilligaan ay Afrika wajahayso ay ka mid yihiin tahriibka iyo abaaraha.
Mahamadou Issoufou oo sii hadlayay ayaa yidhi. “Qaaradda Afrika uma baahna oo keliya in la saacido, balse waxay u baahan tahay in la hagaajiyo maamullada, ganacsiga caalamkana uu noqdo mid cadaalad ku dhisan. dalalka Afrika waxay u baahan yihiin in lagu sameysto maal-gashi dheeraad ah. Gargaarka la siinayo dalalka Afrika waa mid wanaagsan, balse ma ahan mid ku filan baahiyaha jira.”
Dhanka kale, mas’uuliyiinta ururka Midowga Yurub ayaa sheegay in dhaqaalaha ay Afrika ku caawinayaan uu yahay mid ay ugu talo-galeen in wax looga qabto tahriibka faraha ka baxay, iyagoo ballan-qaaday inay Qaaradda ku caawinayaan dhaqaale intaan ka badan.
Ugu dambeyn, Warbixinta lagu soo saaray shirka Malta ku dhexmaray Afrika iyo Yurub ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli toddobaadkii hore ay mas’uuliyiinta Midowga Yurub ay sheegeen in 3-milyan oo qof oo magan-galyo doon ah ay Yurub kusoo wajahan yihiin illaa sannadka 2017-ka.
Ciidanka Kenya oo lagu eedeeyay inay Ganacsi sharci-darro ah ka Sameeyaan Gudaha Somalia
Previous articleCiidamada Kenya Ee Ku Sugan Somalia Oo La Cadeeyay Inay Arrimo Ganacsi Ku Jiraan
Next articleWasiir Cukuse Oo Madaxweynaha Ka Difaacay Eeddo Ay U Soo Jeediyeen Isbahaysiga Musharaxiinta KULMIYE